Wararka - Arrimo badan ayaa xaddidaya horumarinta warshadaha kiimikada dhuxusha ee casriga ah ee Shiinaha
Waxyaabo badan ayaa xaddidaya horumarinta warshadaha kiimikada dhuxusha casriga ah ee Shiinaha
Waqtigan xaadirka ah, cudurka faafa ee sambabaha cusub wuxuu saameyn weyn ku leeyahay nidaamka dhaqaale ee adduunka iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha, isbeddelada qoto dheer ee geopolitics, iyo cadaadiska sii kordhaya ee amniga tamarta. Horumarinta warshadaha kiimikada casriga ee dhuxusha ee waddankeygu waa mid muhiimad weyn oo istiraatiijiyadeed leh.
Dhawaan, Xie Kechang, ku-xigeenka hormuudka Akadeemiyadda Shiinaha ee injineernimada iyo agaasimaha Shaybaarka Muhiimka ah ee Sayniska Dhuxusha iyo Teknoolojiyadda ee Wasaaradda Waxbarashada ee Jaamacadda Taiyuan ee Teknolojiyada, wuxuu qoray maqaal ah in warshadaha kiimikada casriga ah ee dhuxusha, ay qayb muhiim ah ka yihiin nidaamka tamarta, waa inuu "dhiirrigeliyaa wax soo saarka tamarta iyo kacaanka isticmaalka iyo dhisida nidaam nadiif ah oo Kaarboon-yar, nidaam tamar iyo badbaado leh oo hufan" waa tilmaamaha guud, iyo shuruudaha aasaasiga ah ee "nadiif, kaarboon-yar, ammaan iyo hufnaan leh" waa shuruudaha aasaasiga ah horumarinta warshadaha kiimikada casriga ah ee dhuxusha inta lagu jiro "Qorshaha 14-aad ee Shanta Sano". Hadafka "lixda dammaanad" ayaa u baahan in nidaam tamar oo xoog leh uu damaanad qaado soo celinta buuxda ee wax soo saarka iyo kala dambeynta nolosha iyo soo kabashada dhaqaalaha Shiinaha.
Meelaynta istiraatiijiyadeed ee warshadaha kiimikada dhuxusha ee waddankayga ma cadda
Xie Kechang wuxuu soo bandhigay in sanado badan oo horumar ah kadib, warshadaha kiimikada casriga ee dalkayga ay horumar weyn sameeyeen. Marka hore, cabirka guud wuxuu kujiraa safka hore ee aduunka, tan labaad, heerka howlgalka ee banaanbaxa ama xarumaha wax soosaarka ayaa si isdaba joog ah loo hagaajiyay, tan seddexaad, qeyb muhiim ah oo teknoolojiyada kamid ah waa heer caalami ama heer sare ah. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira waxyaabo qaddarin xaddidan ku ah horumarinta warshadaha kiimikada casriga ah ee waddankayga.
Meeleynta istiraatiijiyadeed ee horumarinta warshadaha ma cadda. Dhuxul waa xoogga ugu weyn ee isku filnaanshaha tamarta Shiinaha. Bulshadu kamaqna wacyiga warshadaha kiimikada dhuxusha ee casriga ah iyo warshadaha kiimikada ee dhamaadka-sare ee cagaaran oo nadiif noqon kara waxtarna leh, qeybna badalaya warshadaha kiimikada kiimikada, ka dibna "de-coalization" iyo "urinta kiimikada ee urta" ayaa muuqata, taas oo ka dhigaysa warshadaha kiimikada dhuxusha ee Shiinaha istiraatiijiyad ahaan loo taaganyahay Ma cadda oo ma cadda, taas oo horseedday isbeddello siyaasadeed iyo dareenka ah in shirkaduhu ay fuushanayaan "roster coaster".
Cilladaha ku dhaca gudaha waxay saameyn ku yeeshaan heerka tartanka warshadaha. Warshadaha kiimikada dhuxusha lafteedu waxay leedahay ka faa'iideysiga tamarta iyo waxtarka beddelka kheyraadka, iyo dhibaatooyinka ilaalinta deegaanka ee ay sababaan "saddexda qashin", gaar ahaan biyaha wasakhda ah ee kiimikada, ayaa caan ah; iyadoo ay ugu wacan tahay isku-habeynta hydrogen ee lama-huraanka ah (beddelidda) falcelinta tikniyoolajiyadda kiimikada casriga ah, isticmaalka biyaha iyo qiiqa kaarboonka ayaa sarreeya; Sababtoo ah tirada badan ee alaabada aasaasiga ah, horumarka aan ku filnayn ee alaabada la sifeeyay, lakala geddisan yahay, iyo kuwa takhasuska gaarka ah leh, faa iidada isbarbardhiga ee warshadaha ma muuqato, tartankuna ma xoogsana; farqiga u dhexeeya isdhexgalka tikniyoolajiyadda iyo maaraynta wax soo saarka, qiimaha alaabtu aad buu u sarreeyaa, waxtarka guudna waa inuu ahaadaa mid Hagaajiya iwm.
Deegaanka dibedda ah wuxuu xaddidayaa horumarinta warshadaha. Qiimaha iyo sahayda batroolka, awooda wax soo saarka iyo suuqa, u qoondeynta kheyraadka iyo canshuuraha, maalgalinta amaahda iyo soo celinta, awooda deegaanka iyo isticmaalka biyaha, gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo yareynta qiiqa waa dhamaan arrimaha dibedda ee saameeya horumarka warshadaha kiimikada dhuxusha ee dalkeyga. Waxyaabaha keli keli keli keli keli keli keli keli keli xilliyada qaarkood iyo gobollada qaarkood ma aha oo keliya inay si aad ah u xaddideen horumarka caafimaadka leh ee warshadaha kiimikada dhuxusha, laakiin sidoo kale waxay si weyn hoos ugu dhigtay awoodda ka hortagga khatarta dhaqaale ee warshadaha la sameeyay.
Waa in la wanaajiyo waxtarka dhaqaalaha iyo awoodda ka hortagga halista
Amniga tamarta waa arin guud iyo istiraatiiji ah oo laxiriira horumarka iyo dhaqaalaha bulshada Shiinaha. Iyadoo wajaheysa jawiga adag ee horumarinta gudaha iyo caalamiga ah, horumarinta tamarta nadiifka ah ee Shiinaha waxay u baahan tahay horumar firfircoon ee teknoolojiyada ka saarida wasakhda wax-ku-oolnimada sare, teknoolojiyada xakameynta isku-dhafan ee sunta badan, iyo daaweynta biyaha wasakhda ah. Tikniyoolajiyadda soo-saarista aaladda "Zero-emission" iyo "saddex qashin" tikniyoolajiyadda looga faa'iideysanayo kheyraadka, iyadoo lagu tiirsan yahay mashruucyada bannaanbaxa si loo gaaro warshadeyn sida ugu dhaqsaha badan, isla markaana, iyadoo lagu saleynayo bay'ada jawiga, jawiga biyaha iyo awoodda jawiga ciidda, si cilmiyaysan loo geeyo dhuxusha warshadaha kiimikada tamarta. Dhinaca kale, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso lana hagaajiyo tamarta ku saleysan dhuxusha iyo heerarka wax soo saarka nadiifka ah ee kiimikada iyo siyaasadaha ilaalinta deegaanka ee la xiriira, hagaajinta nidaamka maaraynta wax soo saarka nadiifka ah ee oggolaanshaha mashruuca, kormeerka nidaamka buuxa iyo qiimeynta kadib, caddeynta mas'uuliyadaha kormeerka, sameyso nidaam isla xisaabtan, oo hago oo nidaamiya tamarta ku saleysan dhuxusha horumarinta Nadaafadda warshadaha kiimikada.
Xie Kechang wuxuu soo jeediyay in marka la eego horumarka kaarboon-ka-hooseeya, ay lagama maarmaan tahay in la caddeeyo waxa warshadaha kiimikada tamarta ku saleysan dhuxul-duubka awood u leedahay iyo inaysan ku sameyn karin yareynta kaarboonka. Dhinaca kale, waxaa lagama maarmaan ah in si buuxda looga faa'iideysto faa'iidooyinka ka-soo-saarka sare ee CO-soo-saarka ee habka warshadaha kiimikada tamarta dhuxusha ku saleysan iyo si firfircoon u sahaminta tikniyoolajiyadda CCUS. Gelinta horumarsan ee waxtarka sare ee CCS iyo cilmibaarista gogol xaadhka ah iyo horumarinta tikniyoolajiyadda CCUS sida daadadka CO iyo CO-to-olefins si loo ballaariyo ka faa iideysiga kheyraadka CO; dhanka kale, suurtagal ma aha in "jiirka lagu tuuro" oo la iska indhatiro astaamaha habsami u socodka warshadaha dhuxusha ku saleysan tamarta warshadaha kaarboon-sare, oo la xakameeyo Hormarinta sayniska ee warshadaha kiimikada tamarta ku saleysan dhuxusha waxay u baahan tahay teknoolojiyad carqalad iyada oo loo marayo culeyska yareynta qiiqa ee isha iyo keydinta tamarta iyo hagaajinta waxtarka, iyo daciifinta dabeecadda kaarboon sare ee warshadaha kiimikada tamarta ku saleysan dhuxusha.
Marka laga hadlayo horumarka nabdoon, dowladdu waa inay caddeysaa ahmiyadda istiraatiijiyadeed iyo meelaynta warshadeed ee kiimikooyinka tamarta ku saleysan dhuxusha sida "dhagaxa ballast" ee amniga tamarta dalkayga, oo ay si dhab ah u qaaddo horumarka nadiifka ah ee hufan iyo ka-faa'iideysiga dhuxusha oo ah saldhigga iyo hawsha aasaasiga ah ee isbeddelka tamarta iyo horumarka. Isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in la hoggaamiyo dejinta siyaasadaha tamarta dhuxusha ku saleysan iyo qorshaynta horumarinta kiimikada, hagidda hal-abuurnimada tikniyoolajiyada khalkhalka leh, iyo in si habsami leh loo dhiirrigeliyo tamarta ku saleysan dhuxusha iyo warshadaha kiimikada si tartiib tartiib ah loogu guuleysto mudaaharaad casriyeyn ah, ganacsi dhexdhexaad ah iyo warshadeyn buuxda; dejiso dammaanad qaad khuseeya siyaasad dhaqaale iyo mid maaliyadeed si loo hagaajiyo Dhaqangelinta dhaqaalaha iyo tartanka shirkadaha, sameysmo cabir cayiman oo ah awoodda beddelka tamarta iyo saliidda, loona abuuro jawi dibadeed wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta warshadaha kiimikada dhuxusha casriga ah.
Marka la eego horumarka waxtarka sare, waxaa lagama maarmaan ah in si firfircoon loo fuliyo cilmi baarista iyo codsiga warshadaha ee tiknoolajiyada kiimikada tamarta ku saleysan ee dhuxusha sida isku-dhafka tooska ah ee olefins / aromatics, dhuxusha dhuxusha iyo isdhexgalka gaaska, iyo in la ogaado guulaha laga gaaro tamarta keydinta iyo dhimista isticmaalka; si xoog leh u dhiirrigeliya warshadaha kiimikada tamarta dhuxusha ku saleysan iyo Horumarka isku dhafan ee awoodda iyo warshadaha kale, fidinta silsiladda warshadaha, soo saarista kiimikooyin heer sare ah, dabeecad leh, iyo qiime sare leh, iyo hagaajinta waxtarka dhaqaale, u adkeysiga halista iyo tartanka; sii xoojinta maareynta kartida keydinta tamarta, iyadoo diiradda la saarayo kor u qaadista taxanaha tiknoolajiyada keydinta tamarta sida teknoolojiyada isticmaalka tamarta kuleylka oo heer hoose ah, Teknolojiyadda keydinta dhuxusha iyo biyaha lagu keydiyo, tayaynta tikniyoolajiyadda hannaanka, iyo hagaajinta waxtarka ka faa'iideysiga kheyraadka. (Meng Fanjun)
Ka soo wareejinta: Wershadaha Shiinaha